ADRA Myanmar’s SEAQE2 Project Responds to COVID-19 in Myanmar | ADRA Myanmar | Justice. Compassion. Love
ADRA Myanmar’s SEAQE2 Project Responds to COVID-19 in Myanmar
Emma McCrow: Communications Officer
Since COVID-19 began spreading to countries around the globe, ADRA has been working to ramp up its operations to respond to the highly infectious virus.
Myanmar was one of the last countries to report any cases, despite sharingalong porous border with China where the outbreak began in Wuhan Province. On March 24, Myanmar reported its first2cases, both imported by Myanmar nationals returning to the country. As of4May 2020, there are now 161 confirmed cases,6deaths and 49 recoveries primarily based in Yangon, Myanmar’s largest city.
Due to the COVID-19 outbreak in Myanmar, various ADRA Myanmar projects have been working on responses to support vulnerable communities. In the Norad and ADRA Norway funded SEAQE2 project based in Hpa-an, Kayin State, budget was reallocated to implement activities with the support of the PTA (Parent Teacher Associations) and communities in SEAQE’s targeted schools.
Soap, liquid hand soap and health prevention and awareness posters were distributed to target communities. Due to the limitation in accessing the communities directly, ADRA Myanmar partnered with the PTAs and schools from each community to distribute the items.
34 schools including; 19 Government schools and 15 Community schools (ACS) were targeted to reach 5,139 households inatotal population of 24,687. Below isalist of the items distributed to the communities:
9,400 – A4 Flyers on COVID-19 Prevention
9,400 - A4 Flyers on Cough Etiquette
32 - Posters on COVID-19 Prevention
32 - Posters on Hand Washing Steps
256 – 500ml Liquid Hand Soap
1,344 – 60g Bars of Soap
ADRA Myanmar is also currently planningaresponse in the PRICE project located in Chin State and formulating potential responses in other projects around Myanmar.
ADRA Myanmar ၏ SEAQE2 စီမံကိန်းက COVID-19 တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ဆောင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားသို့ ပြန့်ပွားလာသည်နှင့်အမျှ ADRA သည် ယင်းကူးစက်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်တုံ့ပြန်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ဝူဟန်မြို့မှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဆိုပါရောဂါသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖြစ်ပွားမှုများကို အစီရင်ခံရမည့် နောက်ဆုံးနိုင်ငံများအနက်မှ နိုင်ငံတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာသူနှစ်ဦးထံမှ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ မေလ ၄ ရက်နေ့အထိ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၆၁ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ခြောက်ဦးနှင့် ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၄၉ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီး အများစုမှာ အဓိကအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့် ADRA Myanmar သည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ထောက်ပံ့ရန်အတွက် တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် Norad နှင့် ADRA နော်ဝေတို့၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင်ဆောင်ရွက်နေသည့် SEAQE2 စီမံကိန်း အဓိကလုပ်ဆောင်ရာကျောင်းများရှိ မိဘဆရာအသင်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုတို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ရန်ပုံငွေပြန်လည်ခွဲဝေချထားခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးရည်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေးပိုစတာများကို စီမံကိန်းအဓိကလုပ်ဆောင်သော ကျေးရွာများထံသို့ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဆပ်ပြာ၊ လက်ဆေးရည်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးနှင့် အသိပညာပေးပိုစတာများကို စီမံကိန်းအဓိကလုပ်ဆောင်သော ကျေးရွာများထံသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ယင်းသို့ဖြန့်ဝေရာတွင်လည်း ဆက်သွယ်သွားလာခွင့်အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် ADRA Myanmar သည် အဆိုပါပစ္စည်းများကိုဒေသခံလူထုထံသို့ဖြန့်ဝေရန် မိဘဆရာအသင်းများနှင့် ရပ်ရွာတစ်ခုချင်းစီရှိ ကျောင်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရကျောင်း ၁၉ ကျောင်းနှင့် ရပ်ရွာကျောင်း ၁၅ ကျောင်းစုစုပေါင်း ကျောင်းပေါင်း ၃၄ ကျောင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၅၁၃၉ ဦးထံသို့ ရောက်ရှိရန်လည်း ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ရပ်ရွာတစ်ခုချင်းစီ၌ ဖြန့်ဝေထားသည့် ပစ္စည်းများစာရင်းကိုလည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်ကမ်းစာစောင် - ၉၄၀၀
ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုင်ရာကာကွယ်လုပ်ဆောင်ရေး လက်ကမ်းစာစောင် - ၉၄၀၀
COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးပိုစတာ - ၃၂
လက်ဆေးခြင်းသရုပ်ပြနည်းလမ်းများဆိုင်ရာပိုစတာ - ၃၂
500ml လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်ဘူး - ၂၅၆
60 g ဆပ်ပြာတောင့် - ၁၃၄၄
ADRA Myanmar သည် လတ်တလောတွင် ချင်းပြည်နယ်ရှိ PRICE စီမံကိန်းမှနေ၍ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အခြားသောစီမံကိန်းများအတွက်လည်း အလားအလာရှိသော တုံ့ပြန်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။